Adiga oo raadinaya taageero iyo talo - Somaya Adiga oo raadinaya taageero iyo talo - Somaya
Adiga ama qof kuu dhow ma la kulantaa hanjabaado, rabshad ama cadaadis? Waxaa jira caawimaad la heli karo. Waad soo wici kartaa qadkayaga taageerada ama nagala sheekaysan kartaa. Waxaad heli doontaa taageero, talo iyo macluumaad.
• Waxaan ku hadalnaa luqado badan.
• Waxaan bixinaa xog qarin buuxda.
• Waxaad noqon kartaa qof aan lagaranayn.
• Wicitaanadu waa bilaash oo kama muuqdaan biilka taleefanka.
Maxaa dhacaya markaad na soo wacdo?
Adiga ayaa go’aaminaya waxa dhacaya markaad na soo wacdo adigoo ku saleynaya waxaad rabto iyo waxaad u baahan tahay. Waxaad ka heli kartaa:
• caawinta in ay ka dhadhacaan wixii aad soo martay,
• macluumaad ku saabsan sharciyada iyo xuquuqdaada,
• macluumaad iyo talo ku saabsan halka loo socdo,
• Caawinta laxariirka garyaqaanka, adeega bulshada ama booliska.
Waad na soo wici kartaa inta jeer ee aad rabto. Adiga ayaa go’aaminaya waxaad rabto inaad noo sheegto, anaguna waxaan sameynaa kaliya wixii aad naga codsato inaan ku sameyno.
Waa maxay rabshad?
Rabshaduhu waxay kubilaabmi karaan xiriirka adigoon arkin, sidoo kale waa wax iska caadi ah in aan la ogaan haddii waxa aad la kulmeyso loo arko rabshad. Rabshadaha waxaa geysan kara hal ama dhowr qof. Rabshadaha wuxuu noqon karaa, tusaale ahaan:
• nafsi ahaan / shucuur ahaan
• qalab ama dhaqaale
Telefoonka: 020-81 82 83
Isniinta – Jimcaha: 09: 00-16: 00
Joog guryaha badbaadada leh
Somaya waxay siisaa hoy ammaan ah dadka waaweyn ee lagu xadgudbey iyo caruurtooda. Waxaan aqbalnaa dumarka, ragga iyo dadka LGBTQI ee ka kala yimid Iswiidhan oo dhan. Meeleynta badankood waxay ku dhacdaa Adeegyada Bulshada mararka qaarkoodna waxay u maraan Hay’adda Socdaalka.
Muddada ugu horreysa ee aad ku nooshahay gurigeenna nabdoon waxay ku saabsan tahay goynta xiriirka qofka / dadka isticmaalay rabshad iyo hanjabaad. Waxaad heli doontaa taageero wax ku ool ah iyo mid niyadeed. Haddii aad rabto inaad u gudbiso warbixin booliiska waxaan kaa caawinaynaa inaad la xiriirto garyaqaan si aad talo uga hesho. Waxaan sidoo kale kaa taageereynaa inaad xiriir la yeelatid madaxda, daryeelka caafimaad iyo iskuulada.
Hoygayaga, qof kastaa wuxuu helayaa qol u gaar ah oo la xiri karo. Meelaha la wadaago, sida jikada, qolka fadhiga iyo musqusha, waa la wadaagayaa. Adiga ayaa mas’uul ka ah iibsashada iyo karinta cuntadaada.
Inta aad joogto guryaheena aaminka ah, waxaad ka qayb qaadan kartaa hawlo kala duwan oo awood badan ku yeelaya waxaadna ka heli kartaa taageero inaad ku noolaato nolol madaxbanaan.
Nolol ka xor ah rabshad iyo cadaadis
Hoyga Haweenka iyo Gabdhaha Somaya waa urur aan macaash doon ahayn. Waxaan taageernaa haweenka, ragga iyo dadka LGBTQI ee asalkoodu ajinebiga yahay ee la kulma rabshadaha iyo / ama kula noolaada cadaadis sharaf ku saleysan. Waxaan leenahay in kabadan 20 sano oo khibrad ah waana luuqado badan nahay. Waxaan haynaa khad taageero, wada hadal, guryo nabdoon iyo xarun waxqabad.